“Saddex Jeer Ayaa Addoon Ahaan Liibiya La Iigu Kala Iibsaday…” Nin Tahriibe Ahaa Oo Badbaaday - Wargane News
Home Somali News “Saddex Jeer Ayaa Addoon Ahaan Liibiya La Iigu Kala Iibsaday…” Nin Tahriibe...
Waxaa isa soo taraya wararka ka hadlaya dad nool oo seylad lagu kala iibsanayo dalka Liibiya, waxayna arrintan dusha sare soo marisay wer-werkii laga qabay tahriibka sharci-darada ah iyo dhibaatada ka dhalata.
Waxa uu ka yimid dalka Itoobiya, isaga oo gaadhay dalka Jarmalka kadib muddo badan uu dusha u dhigtay xabsi, jidh-dil iyo halis aanan la qiyaasi karin.
Waxa uu ka yimid gobolka Bale ee Itoobiya sanadkii 2013-kii, halkaas oo muhaajiriinta inta badan ay ka yimaaddaan shaqo la’aanta baahsan ee halkaas ka jirta awgeed.
Safarkiisa waxa uu ka bilaabay dalka Suudaan halkaas oo uu sanad joogay ka hor intii aanu $600 doolar siinin mukhalasiin si ay u geeyaan Liibiya.
Lix maalmood ayay ku qaadatay in uu saxaraha ka tallaabo, ugu dambeyntiina waxa uu gaadhay xudduuda Liibiya, Masar iyo Chad ay wadaagaan, halkaas oo ah meesha tahriibayaasha ay muqalasiinta ku kala badashaan.
Iyaga oo 98 qof ka kooban ayaa la afduubtay, waxaana la geeyay dalka Chad, waxaana madax furasho loogu qabsaday lacag dhan $4,000 qofkiiba.
“Waxaan meesha ugu tagnay dad badan oo ka kala yimid Soomaaliya, iyo Eritrea, shan bilood ayaa meesha lagu heystay, dhibaato badan ayaa loo geystay, xitaa uma ayna ekayn dad bini’aadam ah” ayuu yidhi Haaruun.
Kadib 3 bilood oo ay meel ku xeraysnaayeen, lacagtiina ay iska bixin kari waayeen, ayaa Haaruun iyo koox kale oo 31 qof dhan waxaa loo sheegay in lasii iibin doono maaddaama ay lacagta iska bixin waayeen
“Labo bilood cunto ma aanan cunin, lafo lafo ayaan noqonay, raggii naloo keenay si ay noo iibsadaan ayaaba diiday in ay na iibsadaan, sababtoo ah waxay dhaheen waa caato aad ah, ma iibsan karno” ayuu yidhi Haaruun.
Ugu dambeyntii nin ayaa nagu iibsaday min $3000 qofkiiba, wuxuuna ahaa nin ka yimid magaalada Liibiya ku taala ee Saba.
Saba waxa ay ku xidhnaayeen muddo bil kale ah, halkaas oo si xun loogu jidh-diley, markii dambana eheladooda ayaa lacagtii ka bixiyay. Balse markii ay meeshii ka baxeen ayaa waxaa af duubtay qolo kale oo madax furasho ugu qabsaday lacag dhan kun doolar.
Markale ayay waceen eheladooda kadib markii ay u adkeysan waayeen jidh-dilka, waxaa loo soo iibiyey xoolo iyo wax kasta oo la heli karayey si meesha looga siidaayo
Wuxuu sheegay in xitaa haddii ay booliiska ku qabtaan ay kaasii iibsanayaan muqalasiin kale, kaana siisanayaan $500 doolar.
Sanad kasta kumanaan muhaajiriin Afrikaan ah ayaa gala safarrada halista badan sida Haaruun oo kale, qaarkood ayaa dhexda ku dhinta, badankoodna waxa ay ku dhintaan badaha, halka inta yar ee gaadha Yurub ayna haysanin damaanad ah in ay helayaan wixii ay halista u soo galeen.
“Runtii wax iga maqnaa ma jiraan, aqoon-darro ayaa i heysay markaan dalkeyga kasoo tagayay, waxna waan iska baran karayey, shaqana waan tagi karayey.”ayuu yidhi, Haaruun oo ka qoomamoonaya wixii qabsaday ee dhib ahaa.
Somaliland: Xirsi Cali X. Xasan Iyo Maxamed Biixi Yoonis Oo Ku Biiri Doona Xisbiga WADDANI Xaflad Bilaa Taageerayaal Ah Oo Maanta Lagu Qaabilayo
Somaliland: Dahabshiil CEO tips African entrepreneurs to gain from US Africa partnership
Somaliland: Hoggaamiyaha Xisbiga WADDANI Iyo Wafti Uu Horkacaayo Oo Si Ballaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Degaanada Qorilugud, Coodanle, Balidhiig Iyo Dhoqoshay